တဈနကေ့ရြငျ ကြှနျမ ပြျောရမှာပါ – Shinyoon
တဈနကေ့ရြငျ ကြှနျမ ပြျောရမှာပါ
တဈနကေ့ရြငျ…. လူတိုငျးရရှေတျဖူးတဲ့စကားလုံးလေးတဈလုံးပါ … တဈနကေ့ရြငျတော့ ဆိုတဲ့အနောကျမှာ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပါလာတတျသလို ဝမျးနညျးမှုတှလေဲ ရှိနတေတျတာ သဘာဝပါပဲ ။ အဲ့ဒီတဈနကေ့ရြငျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးနဲ့ အသကျဆကျနတေဲ့လူတှလေဲ ရတှေကျလို့မကုနျရှိနလေိမျ့မယျထငျပါတယျ ။အဲ့ဒီလိုလူတှထေဲမှာ ကြှနျမလဲ တဈဦးအပါအဝငျပေါ့ ။
တဈနကေ့ရြငျ ခဈြကောငျးပါရဲ့ဆိုပွီး ကိုယျ့ကို မခဈြတဲ့သူကို ဖကျတှယျထားတဲ့လူတှလေဲရှိကွလိမျ့မယျ သူမခဈြဘူးဆိုတာကို မွငျနမှေနျးသိသိရဲ့နဲ့ ဆကျပွီးရပျနခေငျြတဲ့ ဆန်ဒကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့မြှျောလငျ့ခကျြလေးပေါ့ အဲ့ဒီရဲ့တဈနရေ့ငျဆိုတဲ့စကားလုံးတှနေောကျမှာ မကျြရညျတှပေါတယျ ။ လကျရှိဖွဈပကျြနတောတှရေဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျတှမြှေျောလငျ့ရငျးသာ ဆကျနနေရေတာ တကယျတမျးကတြော့ ဒဏျရာတှနေဲ့ ။
တဈနကေ့ရြငျ အဆငျပွလောမှာဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာကြ လကျရှိအဆငျပွမေနပေါဘူးဆိုတဲ့ ရငျဖှငျ့သံတှပေါတယျ ။ ဘာပဲဖွဈလာဖွဈလာ မနာကငျြပါဘူးဆိုတဲ့လူကတော့ ဘယျရှိပါ့မလဲ ဘယျလောကျပဲ ရငျ့ကကျြပါတယျပွောပွောအနညျးနဲ့အမြားတော့ နာကငျြနရေတာပဲ အဆငျမပွပေမေယျ့ ရပျလိုကျလို့မရတဲ့ခွလှေမျးတှအေတှကျ တဈနကေ့ရြငျ အဆငျပွလောမှာဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ အားတငျးခဲ့ရဖူးတဲ့ရကျတှရှေိတယျ ။
တဈနကေ့ရြငျ နားလညျလာမှာပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးမှာကြ ကိုယျတကယျပငျပနျးနပေါပွီဆိုတဲ့ အရိပျအယောငျလေးတှပေါတယျ … ဘယျလောကျထိ ပေးဆပျခဲ့ဖူးလဲဆိုတာ မသိကွမမွငျကွပဲ ကိုယျဟာ အပိုအဖွဈ ခံစားလာရတဲ့အခါမှာသုံးတယျ ။ နားလညျစခေငျြပါတယျဆိုတဲ့စိတျရှိပမေယျ့ ကိုယျ့ကို ဘယျသူ့မှ နားလညျမပေးနိုငျမှနျးသိတဲ့အခါတှကေ တကယျကို ပငျပနျးလှပါတယျ … ဒီလိုမြိုးတဈနကေ့ရြငျ နားလညျလာမှာဆိုတဲ့စကားမှာ … အဝေးကွီးထှကျပွေးသှားဖို့အတှေးတှေ ပါခငျြပါနတေတျတာ ။
တဈနကေ့ရြငျ ပွောငျးလဲလာမှာပေါ့ဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးကကတြော့ … ကိုယျ့အတှကျမဟုတျတောငျ သူ့အတှကျပွောငျးလဲစခေငျြပါတယျဆိုတဲ့ မတ်ေတာရှငျလေးတှမှော တှရေ့တတျတယျ ။ ငါပွောငျးလဲပေးရငျ ရမှာပါဆိုတဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှရှေိခဲ့ပေးမယျ့ အဲ့ဒီရညျမှနျးခကျြတှေ ဝဝေါးသှားတဲ့အခါ တဈနကေ့ရြငျတော့ သူပွောငျးလဲကောငျးပါရဲ့ဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးကနျြသေးတာပေါ့ ။
ကြှနျမ တို့တှေ ဒီလို တဈနကေ့ရြငျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးနဲ့ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ရကျတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ ဒီစကားလုံးမှာ … နာကငျြမှုတှပေါတယျ .. ဒဏျရာတှပေါတယျ ရငျဖှငျ့သံတှပေါတယျ သာမနျစကားလုံးလေးပါပဲဆိုပမေယျ့ ကြှနျမတို့ရဲ့ အနာဂတျတှတေောငျ ပါခငျြပါနတေတျသေးတာ …
ခုလောလောဆယျတော့ တဈနကေ့ရြငျ ကြှနျမ ပြျောရမှာပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးသုံးတယျ ။
တစ်နေ့ကျရင်…. လူတိုင်းရေရွှတ်ဖူးတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးပါ … တစ်နေ့ကျရင်တော့ ဆိုတဲ့အနောက်မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပါလာတတ်သလို ဝမ်းနည်းမှုတွေလဲ ရှိနေတတ်တာ သဘာဝပါပဲ ။ အဲ့ဒီတစ်နေ့ကျရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ အသက်ဆက်နေတဲ့လူတွေလဲ ရေတွက်လို့မကုန်ရှိနေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ။အဲ့ဒီလိုလူတွေထဲမှာ ကျွန်မလဲ တစ်ဦးအပါအဝင်ပေါ့ ။
တစ်နေ့ကျရင် ချစ်ကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့သူကို ဖက်တွယ်ထားတဲ့လူတွေလဲရှိကြလိမ့်မယ် သူမချစ်ဘူးဆိုတာကို မြင်နေမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ဆက်ပြီးရပ်နေချင်တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးပေါ့ အဲ့ဒီရဲ့တစ်နေ့ရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနောက်မှာ မျက်ရည်တွေပါတယ် ။ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေမျှော်လင့်ရင်းသာ ဆက်နေနေရတာ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ။
တစ်နေ့ကျရင် အဆင်ပြေလာမှာဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာကျ လက်ရှိအဆင်ပြေမနေပါဘူးဆိုတဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေပါတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ မနာကျင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူကတော့ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ ဘယ်လောက်ပဲ ရင့်ကျက်ပါတယ်ပြောပြောအနည်းနဲ့အများတော့ နာကျင်နေရတာပဲ အဆင်မပြေပေမယ့် ရပ်လိုက်လို့မရတဲ့ခြေလှမ်းတွေအတွက် တစ်နေ့ကျရင် အဆင်ပြေလာမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အားတင်းခဲ့ရဖူးတဲ့ရက်တွေရှိတယ် ။
တစ်နေ့ကျရင် နားလည်လာမှာပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးမှာကျ ကိုယ်တကယ်ပင်ပန်းနေပါပြီဆိုတဲ့ အရိပ်အယောင်လေးတွေပါတယ် … ဘယ်လောက်ထိ ပေးဆပ်ခဲ့ဖူးလဲဆိုတာ မသိကြမမြင်ကြပဲ ကိုယ်ဟာ အပိုအဖြစ် ခံစားလာရတဲ့အခါမှာသုံးတယ် ။ နားလည်စေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပေမယ့် ကိုယ့်ကို ဘယ်သူ့မှ နားလည်မပေးနိုင်မှန်းသိတဲ့အခါတွေက တကယ်ကို ပင်ပန်းလှပါတယ် … ဒီလိုမျိုးတစ်နေ့ကျရင် နားလည်လာမှာဆိုတဲ့စကားမှာ … အဝေးကြီးထွက်ပြေးသွားဖို့အတွေးတွေ ပါချင်ပါနေတတ်တာ ။
တစ်နေ့ကျရင် ပြောင်းလဲလာမှာပေါ့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးကကျတော့ … ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တောင် သူ့အတွက်ပြောင်းလဲစေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မေတ္တာရှင်လေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ် ။ ငါပြောင်းလဲပေးရင် ရမှာပါဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပေးမယ့် အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေ ဝေဝါးသွားတဲ့အခါ တစ်နေ့ကျရင်တော့ သူပြောင်းလဲကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးကျန်သေးတာပေါ့ ။
ကျွန်မ တို့တွေ ဒီလို တစ်နေ့ကျရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ရက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ဒီစကားလုံးမှာ … နာကျင်မှုတွေပါတယ် .. ဒဏ်ရာတွေပါတယ် ရင်ဖွင့်သံတွေပါတယ် သာမန်စကားလုံးလေးပါပဲဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ အနာဂတ်တွေတောင် ပါချင်ပါနေတတ်သေးတာ …
ခုလောလောဆယ်တော့ တစ်နေ့ကျရင် ကျွန်မ ပျော်ရမှာပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးသုံးတယ် ။